Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Ụlọ ahịa ọla nke Bulgari dị na Paris kpochapụrụ na million 10 nde
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ewepụrụ ọla ịchọ mma dị nde 10 na nnukwu ụlọ ahịa Paris boutique heist
Ohi Paris a mere na etiti ehihie na Tuesday. Ọ bụ ezie na ndị uwe ojii akpọbeghị aha ụlọ ahịa ahụ, a hụrụ nnukwu ọnụnọ ndị mmanye iwu na ụlọ ahịa Bulgari, nke o doro anya na ọ bụ ndị ohi.
Ndị ohi kụrụ ụlọ ahịa ọla nke Bulgari dị n'etiti Paris.
Stolen Ezuru ihe ịchọ mma ruru nde iri ka e zuru ohi ehihie.
Ndị uwe ojii France jidere mmadụ abụọ a na-enyo enyo mgbe ha chụchara ọsọ ọsọ.
Ndị na -apụnara mmadụ ihe kụrụ nnukwu ụlọ ahịa ihe ịchọ mma nke etiti Paris dị na ebe a ma ama Vendôme, a kọrọ na ezuru ihe ịchọ mma nke nde € 10 ($ 11.8 nde) na ohi dị ọkụ.
Ndị ohi ahụ mere n'ihe dịka elekere iri na abụọ nke abalị Tuzde. Ọ bụ ezie na ndị uwe ojii akpọbeghị aha ụlọ ahịa ahụ, a hụrụ ọnụnọ siri ike nke ndị mmanye iwu n'ụlọ ahịa bulgari boutique, nke o doro anya na ọ bụ ndị ohi.
Paris ndị uwe ojii nwụchiri mmadụ abụọ a na -enyo enyo, a na -agakwa n'ihu na -achọ ndị ohi ndị ọzọ.
E jidere mmadụ abụọ a na-enyo enyo ka ha na-agbalị ịgbapụ na mpụ ahụ, ndị uwe ojii kwuru, na-enyeghị nkọwa ọ bụla ọzọ, mana ụfọdụ isi ndị uwe ojii gosiri na ohi ahụ ghọrọ nnukwu ọsọ ọsọ, ebe ndị a na-enyo enyo nwara iji pụọ BMW ụgbọ ala na ndị ọgba tum tum abụọ.
Dị ka akụkọ mgbasa ozi mpaghara si kwuo, otu onye uwe ojii merụrụ ahụ nke ukwuu n'oge a na -achụ, mgbe ụgbọ ala kụrụ ya, ebe otu onye n'ime ndị a na -enyo enyo gbagburu ụkwụ.
Ọnụ ọgụgụ a na -amaghị ndị a na -enyo enyo ka nọ na nzuzo. Dị ka akụkọ si kwuo, ha jisiri ike jiri nnukwu ngwongwo zuru ohi gbafuo na ọnụ ahịa ya ruru nde € 10.
Ihe ahụ merenụ bụ ihe kacha ọhụrụ na nnukwu ihe ịchọ mma ịchọ mma n'isi obodo France n'oge ọkọchị a. N'ọnwa Julaị, otu onye ohi ji ngwa ọgụ wepụrụ nnukwu okwute na ihe ịchọ mma n'ehihie site na a Chaumet ụlọ ahịa dị nso na Champs-Elysées. E jidere onye ohi n'oge ahụ ya na onye so ya obere oge mwakpo ahụ gasịrị, a napụtakwara ngwongwo ahụ, nke ọnụ ahịa ya ruru nde € 3 ($ 3.5 nde).
Naanị ụbọchị ole na ole ka emechara Chaumet Heist, ndị ohi abụọ kụrụ a Din Din ụlọ ahịa, na -ezuru ihe dị ka € 400,000 na ego, na ihe ịchọ mma nwere ọnụ ahịa atụmatụ nke million 2 nde ($ 2.3 nde).